C/raxmaan Faroole oo Looga Guuleystay Doorashada Hogaanka Guddiga dib u eegista Dastuurka – Balcad.com Teyteyleey
Doorashada hogaanka guddiga la socodka iyo dib u eegista dastuurka ayaa maanta ka dhacday magaalada Muqdisho iyadoo la dooranayay Guddoomiye, Guddoomiye ku xigeen iyo Xoghaye.
Gudoomiyaha guddiga la socodka iyo dib u eegista dastuurka ee labada aqal waxaa isku soo sharxay Saddex Mudane waxaa tanaasulay Axmed Mayow Cabdulle iyadoo ay isku soo hareen Cabdi Xasan Cawaale Qeybdiid iyo Cabdiraxmaan Maxamed Faroole.
Codaynta Gudoomiyaha oo ay codaynayeen 10-ka mudane ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ee qaabilsan gudiga la socodka iyo dib u eegista dastuurka ayaa waxaa lix cod helay Senator Cabdi Xasan Cawaale Qeybdiid oo ku guulaystay Gudoomiyaha guddiga la socodka iyo dib u eegista dastuurka ee labada aqal halka Senater Cabdi Raxmaan Maxamed Maxamuud Faroole uu helay afar cod.
Gudoomiye ku xigeenka gudiga la socodka iyo dib u eegista Dastuurka waxaa helay Xildhibaan Maxamed Cabdulaahi Kaamil ma jirin cid la tartantay.
Xilka xoghayaha guddiga la socodka iyo dib u eegista Dastuurka waxaa u tartamay Laba Mudane oo kala ah Senater Xuseen Sheeq Maxamuud iyo Xildhibaan Cabdirashiid Maxamuud Xasan waxaana lix cod ku guulaystay Senator Xuseen Shiikh Maxamuud halka Xildhibaan Cabdirashiid Maxamuud Xasan uu helay afar cod.
The post C/raxmaan Faroole oo Looga Guuleystay Doorashada Hogaanka Guddiga dib u eegista Dastuurka appeared first on Ilwareed Online.